အိမ်ထောင်သက် ၁၉ နှစ်ပြည့်ကို ၂ဦးတည်းဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ David Beckham တို့စုံတွဲ
6 Jul 2018 . 11:51 AM
အနုပညာလောကရဲ့ အားကျစရာအကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ David Beckham နဲ့ Victoria Beckham တို့ကတော့ ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့မှာ သူတို့ ၂ဦးရဲ့ အိမ်ထောင်သက် ၁၉ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ Date လေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအထိမ်းအမှတ်နေ့လေးကို သူတို့၂ဦးတည်း စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ တူတူလက်ဆုံစားပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂ဦးသားလုံး အဲ့ဒီပွဲနေ့က ပျော်စရာတွေကို ၂ဦးလုံးရဲ့ Instagram Account တွေမှာမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်တာကာလအတွင်း ပြတ်စဲလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတောင် ခုချိန်ထိ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်တွေပြည့်နှက်နေကြတဲ့ပုံကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
Victoria က ၂ဦးသားအမှတ်တရတွေကို 19 years!!! X I love u so much” ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး Wine တွေထဲမှာမှ A-List စာရင်းဝင် £1500 ခန့်ကျတဲ့ Batard-Montrachet Grand Cru 2009 တံဆိပ် Wine ပုလင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။
David ကတော့ သူတို့ရဲ့ အထင်ပေါ်ဆုံးမင်္ဂလာပွဲအမှတ်တရလေးဖြစ်တဲ့ ခရမ်းရောင်ဆင်တူဝတ်စုံနဲ့ ကိတ်ခွဲနေခဲ့တဲ့ပုံလေးကို တင်ခဲ့ပြီး “19 Years WOW….This time 19 years ago I was dressed from gead to toe in purple….Happy anniversary to the most amazing wife & mummy…Love You,’ ဆိုပြီး ချီးမွမ်းစကားလေးနဲ့ တင်ခဲ့ပါတယ်။
Anniversary Date မတိုင်ခင်မှာလည်း Anniversary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရိပ်အမြွက်လေးတွေကို Victoria ကိုယ်တိုင် သူမ Instagram မှ တဆင့် ပရိသတ်တွေသိအောင် မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ပထမဆုံးပုံလေးကတော့ ငွေရောင်ဘောလုံးကြီးတွေအပြည့်ကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပြီး “Lucky mommy and daddy X ” လို့ Caption လေးရေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပုံကတော့ David ရဲ့မိခင်မှ ပေးခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဖြူပန်းစည်းလေးဖြစ်ပြီး တတိယပုံကတော့ David အတွက် သူမ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ 1990 ပြည့်နှစ်ကထုတ်တဲ့ ရှားပါး Wine ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Date လုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ David ရော Victoria ရော သာမန်မိသားစုတွေလိုပဲ သမီးအငယ်ဆုံး Harper ရဲ့ ကျောင်းက အားကစားနေ့အထိမ်းအမှတ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာလည်း ဖေဖေ David ခမျာ တခြားဖေဖေတွေနဲ့ ကွင်းထဲမှာ ပဲအိတ်ကြီးကို ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်နေတာကို Victoria က Instagram မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ၂ဦးသားရဲ့ ၁၉ နှစ်ပြည့် Anniversary Date လေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ နှစ်ထိတိုင်အောင် အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်သဘောထားမတူညီတွေမှုတွေကြား အိမ်ထောင်တစ်ခုကို အခုထိ အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ David နဲ့ Victoria တို့စုံတွဲကတော့ စံနမူနာယူထိုက်ဆုံးစုံတွဲပါပဲ။
အိမျထောငျသကျ ၁၉ နှဈပွညျ့ကို ၂ဦးတညျးဆငျနှဲခဲ့ကွတဲ့ David Beckham တို့စုံတှဲ
အနုပညာလောကရဲ့ အားကစြရာအကောငျးဆုံး အိမျထောငျရေးကိုပိုငျဆိုငျထားကွတဲ့ David Beckham နဲ့ Victoria Beckham တို့ကတော့ ဇူလိုငျလ ၅ရကျနမှေ့ာ သူတို့ ၂ဦးရဲ့ အိမျထောငျသကျ ၁၉ နှဈပွညျ့အမှတျတရ Date လေးကို ပြျောပြျောရှငျရှငျဆငျနှဲခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီအထိမျးအမှတျနလေ့ေးကို သူတို့၂ဦးတညျး စားသောကျဆိုငျတဈခုမှာ တူတူလကျဆုံစားပွီး ဖွတျသနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၂ဦးသားလုံး အဲ့ဒီပှဲနကေ့ ပြျောစရာတှကေို ၂ဦးလုံးရဲ့ Instagram Account တှမှောမြှဝခေဲ့တာဖွဈပွီး ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ၁၉ နှဈတာကာလအတှငျး ပွတျစဲလုနီးပါးဖွဈခဲ့ရတဲ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာတောငျ ခုခြိနျထိ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခဈြတှပွေညျ့နှကျနကွေတဲ့ပုံကို တှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။
Victoria က ၂ဦးသားအမှတျတရတှကေို 19 years!!! X I love u so much” ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ဖျောပွခဲ့ပွီး Wine တှထေဲမှာမှ A-List စာရငျးဝငျ £1500 ခနျ့ကတြဲ့ Batard-Montrachet Grand Cru 2009 တံဆိပျ Wine ပုလငျးနဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ကွပါတယျ။
David ကတော့ သူတို့ရဲ့ အထငျပျေါဆုံးမင်ျဂလာပှဲအမှတျတရလေးဖွဈတဲ့ ခရမျးရောငျဆငျတူဝတျစုံနဲ့ ကိတျခှဲနခေဲ့တဲ့ပုံလေးကို တငျခဲ့ပွီး “19 Years WOW….This time 19 years ago I was dressed from gead to toe in purple….Happy anniversary to the most amazing wife & mummy…Love You,’ ဆိုပွီး ခြီးမှမျးစကားလေးနဲ့ တငျခဲ့ပါတယျ။
Anniversary Date မတိုငျခငျမှာလညျး Anniversary နဲ့ပတျသကျတဲ့ အရိပျအမွှကျလေးတှကေို Victoria ကိုယျတိုငျ သူမ Instagram မှ တဆငျ့ ပရိသတျတှသေိအောငျ မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ ပထမဆုံးပုံလေးကတော့ ငှရေောငျဘောလုံးကွီးတှအေပွညျ့ကိုရိုကျပွထားတာဖွဈပွီး “Lucky mommy and daddy X ” လို့ Caption လေးရေးထားခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယပုံကတော့ David ရဲ့မိခငျမှ ပေးခဲ့တဲ့ နှငျးဆီဖွူပနျးစညျးလေးဖွဈပွီး တတိယပုံကတော့ David အတှကျ သူမ စီစဉျထားခဲ့တဲ့ 1990 ပွညျ့နှဈကထုတျတဲ့ ရှားပါး Wine ပဲဖွဈပါတယျ။
Date လုပျပွီးခြိနျမှာတော့ David ရော Victoria ရော သာမနျမိသားစုတှလေိုပဲ သမီးအငယျဆုံး Harper ရဲ့ ကြောငျးက အားကစားနအေ့ထိမျးအမှတျပြျောပှဲရှငျပှဲမှာ ဆငျနှဲခဲ့ကွပါတယျ။
အဲ့ဒီပှဲမှာလညျး ဖဖေေ David ခမြာ တခွားဖဖေတှေနေဲ့ ကှငျးထဲမှာ ပဲအိတျကွီးကို ခေါငျးပျေါတငျပွီး အပွေးပွိုငျပှဲဝငျနတောကို Victoria က Instagram မှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ၂ဦးသားရဲ့ ၁၉ နှဈပွညျ့ Anniversary Date လေးကို ပြျောပြျောရှငျရှငျအဆုံးသတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၁၉ နှဈထိတိုငျအောငျ အခကျအခဲတှေ၊ စိတျသဘောထားမတူညီတှမှေုတှကွေား အိမျထောငျတဈခုကို အခုထိ အခဈြတှအေပွညျ့နဲ့ ရရှေညျတညျတံ့အောငျ ထိနျးသိမျးခဲ့တဲ့ David နဲ့ Victoria တို့စုံတှဲကတော့ စံနမူနာယူထိုကျဆုံးစုံတှဲပါပဲ။